nisy nahatsikaritra ve ilay raopilanina iny
Par: pr mahiratra
Date: 09 février 2018 - 15:16
.. tamin'iny nandalo eran'ny tanana, hatrany ambanivohitra any
tamin'iny nandalo ho aho, dia nanomboka teo aho no voan'ny gripa ; gripa hafahafa
dia tratra daholo ny tato antrano. Izaho izay tsy dia andairan'ny aretina loatra.
Iny mantsy afaka mandraraka zavatra dia entin'ny rivotra eny.
Any no alehan'ny saiko amin'izao fotoana mampisavoritaka ny saim-bahoaka sahirana izao. Mety tsy mampiahotra izay efa ratsy fanahy mihevitra fa mahita tombony amin'ny fijaliam-bahoaka, ny mamono olona amin'izao.
Ary isika ve tsy mba miahiahy fa misy koa izany teknolojia mandefa "onde" ratsy izany ka manakorontana ny fahasalamana amin'ny vatan'ny olombelona. Ka raha ny fifandraisan'ny samy olona toy ireny amin'ny "franc maçon" sy ny karazany maro ireny dia mahasahy manao izany.
* enga anie ka ny toetr'andro mafana migaingaina fotsiny sy be orana ihany no nahavoa anay.
Re: nisy nahatsikaritra ve ilay raopilanina iny
Date: 10 février 2018 - 06:01
Araka ny fandinihana nataoko dia lasa miteniteny foana daholo ny gasy nanomboka 2009, niainga t@ délira teny @ 13 mai, mandalo @ mpiogaoga jesosy ao @ télé sy eny @ fiaraha monina rehetra eny, tonga hatraty @ forum, izao indray dia misy ropilanina manaparitaka virus , tsy maintsy hisy hilaza fa roplanin ny zanak i dada indray iny atsy ho atsy an!